Jurgen Klopp Oo Duur Xul Cajiib Ah Ku Ganay Lacagta Badan Ee Frank Lampard Suuqa Loogu Adeegayo Iyo Fursada Reds Ee Saxiixyo Cusub Oo Uu Ka Hadlay. - Gool24.Net
Jurgen Klopp Oo Duur Xul Cajiib Ah Ku Ganay Lacagta Badan Ee Frank Lampard Suuqa Loogu Adeegayo Iyo Fursada Reds Ee Saxiixyo Cusub Oo Uu Ka Hadlay.
Tababaraha kooxda Liverpool ee Jurgen Klopp ayaa ka hadlay suurtogalnimada ay kooxdiisa Reds saxiixyo u samayn karto xagaagan wuxuuna sidoo kale ka hadlay xaaladii ay kooxdiisu ku jirtay markii ay Chelsea ku wada ciyaareen Stamford Bridge ee qaybtii hore ee xili ciyaareedkan.
Klopp oo u duur xulaya kooxda Frank Lampard ayaa ku dooday in kulankii hore ee Stamford Bridge ay labada kooxood isku dhawaayeen balse ay hadda 30 dhibcood ka sareeyaan kooxda Blues.
Laakiin Klopp ayaa ku dooday in marka ay Anfield iskugu soo galaan in ayna labada kooxood noqon doonin sida kuwo ay 30 dhibcood u dhexeeyaan.
Waxa uu Klopp kooxda Chelsea ugu duur xulay guuldaradii ay Stamford Bridge ku soo badeen xili ciyaareedkan isaga oo sheegay in adkaysigii ciyaartoyda kooxdiisa Reds ee kulankaasi aanu ahayn wax suuqa kala iibsiga lacag loogaga heli karo.
Klopp ayaa cadeeyay in saamaynta dhaqaale ee cudurka karoona uu gabi ahaanba badalay dhaqaalihii ganacsiga aduunka gaar ahaan kubbada cagta wuxuuna cadeeyay in wixii suurtogal ah ay saxiiyo samayn doonaan.
Jurgen Klopp oo qorshaha kooxdiisa ee suuqa iyo saamaynta karoonaha ka hadlaya ayaa yidhi: “Anagu waxaanu isku daynaa in aanu si joogto ah u samayno go’aano sax ah, laakiin kadib waxaa yimid Karoonaha oo markale xaalada badalay, ma aha dhinaca wanaagsan, waa dhamaan ganacsiga aduunka oo dhan ee ma aha kaliya kubbada cagta”.
Klopp oo ka hadlaya aragtidooda in ay suuqa xoojin ka samayn karaan ayaa yidhi: “Ma aha in aanaan ka fikirayn in aanaan awoodin in aanu horumar samayn karno ee xataa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. Taas waxaanu u samaynaa marka ay suurtogalka noo tahay iyo waxa aanu awoodno in aanu samayno”.
Kadib waxa uu Klopp ka hadlay kulanka Chelsea iyo sidii ay labada kooxood iskugu dhawaayeen kulankii Stamford Bridge iyo sida ay hadda 30 dhibcood ugu dheeyaan wuxuuna yidhi: “Waxaad aragtay sida ay cidhiidhiga u ahayd ciyaartii aanu Chelsea martida ugaga soo guulaysanay 2-1 ka. Hadda waxay naga danbeeyaan 30 dhibcood, laakiin garoonka farqi 30 dhibcood ahi kama jiri doonaan marka uu mid kaayaba kan kale la ciyaarayo”.
Klopp oo u duur xulaya Chelsea ayaa yidhi: “Iyagu xaqiiqdii waxay ciyaari karaan kubbada cagta, waxayna sidoo kale guulaysan karaan ciyaarta, laakiin wiilashaydu si waali ah ayay adkaysi u lahaayeen, wax walba ciyaarta ayay dul dhigeen taas ayaana ahayd farqiga noo dhexeeyay. Anigu ma ogi haddii aad taas suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ka soo iibsan karto!”.
Liverpool ayaa dili karta rajada kaalinta saddexaad ee ay Chelsea ugu doonayso in ay Champions League ugu soo baxdo iyada oo Reds doonaysa in ay xili ciyaareedka ay koobkiisa xiliga hore ku guuaysatay in ay ku soo gaba gabayso guul ay koobka ugu dabaal degto maadaama oo uu noqon doono kulankoodii Anfield ugu danbeeyay xili ciyaareedkan.